Biyo dhiig u eg oo qabsaday dariiqyada tuulo ku taal Induniisiya | Xaysimo
Home War Biyo dhiig u eg oo qabsaday dariiqyada tuulo ku taal Induniisiya
Biyo leh midab casaan ah ayaa shalay oo sabti ahayd ku qulqulay waddada Jenggot ee bartamaha jasiiradda Java.
Kumannaan qof oo ka mid ah dadka isticmaala baraha bulshada ayaa wadaagayay sawirro muujinaya biyo guduud ah oo qarqiyay tuuladaasi. Mas’uul ka shaqeeya arrimaha gargaarka ee deegaankaasi ayaa xaqiijiyay in sawirradaasi ay ka turjumayaan xaqiiqada dhabta ah ee halkaasi ka jirto.
“Biyaha guduudka ahi ee ku fatahay tuuladaasi waxay ahaayeen asalka ama rinjiga lagu xardho dharka ee batik oo daad uu ku dhuftay,” ayuu yiri, Dimas Arga Yudha, oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters. Guduudkaasi ayaa xoogaa kaddib baaba’i doono markuu ku da’o roob xooggan. “
Wabiyada ku yaal Pekalongan ayaa marar hore la arkay iyaga oo wado biyo midabbo leh sababtuna waxaa lagu sheegay rinjiga dharka lagu xardho ama aslo oo marka ay roobabku da’aan ku milmo daadadka, waxaana sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuter, bishii la soo dhaafay la arkay biyo cagaaran oo ku fatahay tuulo kale.
Mas’uuliyiinta dalkaasi ayaa qaaday tallaabooyin dhawr ah oo looga hortagayo roobabka lixaadka leh ee ka da’o dalkaasi, waxaana ka mid ah in diyaarado ay kiimiko ku daraan daruuraha ka inta uusan roobku soo di’in- iyagoo isku dayaya in ay ka hortagaan roobab xooggan maadaama sanadkii 2013 dalkaasi uu wajahay fatahaadihii ugu ba’naa taariikhda inta la ogyahay.